﻿﻿ Puntland State of Somalia – Raysal-wasaare Cumar Cabdirashiid oo siweyn loogu soo dhaweeyey magaalo Madaxda Puntland ee Garoowe
Raysal-wasaare Cumar Cabdirashiid oo siweyn loogu soo dhaweeyey magaalo Madaxda Puntland ee Garoowe
Soo dhaweynta raysal-wasaaraha dalka Soomaliya waxaa ka qeyb qaatey madaxweynaha dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas , madaxweyne ku xigeenka dawladda Puntland Eng. Cabdixakiin Cabdulaahi Cumar Camay , Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Siciid Xasan Shire ,Wasiiro, Xildhibaano ,Haween , Dhalinyaro iyo Dadweyne aad u badnaa ku waasi oo diyaar garow xoogan ugu jiray soo dhaweynta raysal-wasaaraha iyo wefdiga uu hogaaminayey.
“Waxaa Sharaf weyn noo ah in Puntland gaar ahaan Caasimadda Garoowe nagu soo booqdo Raysal-wasaaraha dalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo weftiga uu hogaaminayo oo ka kooban xukuumadda iyo baarlamaanka ”Ayuu yiri Madaxweyne Gaas .
“Raysal Wasaare Soo dhawoow Garoowe waa dalkaagi,waa dadkaagi way ku soo dhaweynayaan aad beyna shacabku kuugu faraxsan yahiin inaad noo timaado ”Ayuu yiri Madaxaweyne Gaas .
“Wefdigu muddo dhowr cisho ah ayey nala joogi doonaa, waxbadan oo ka dhaxeeya dawladda Puntland iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaanu kawada hadli doonaa, cumarna waa markii ugu horaysay oo uu Garoowe yimaado isaga oo raysal-wasaare ah ” Ayuu hadalka raaciyey Madaxweyne Gaas.
“Waan bogaadinayaa runtii sida Puntland ay ugu dadaashay xasiloonideeda, amaanka iyo nabad-gelyada kajirta, halkaana waxaanu unimi inaanu wadatashi samayno ” ayuu yiri raysal-wasaaraha dalka soomaaliya Cumar Cabdirashiid.
By Puntland State Site Editor|2015-04-29T06:35:54+00:00April 29th, 2015|Latest News, Somali news|Comments Off